ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ပင်ကိုသဘာဝစရိုက်
အရမ်းကောင်းတဲ့ ဆောင်းပါးလေးပဲ ညီမရေ ။ ဖတ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကို ပိုလေးစားမိတယ်
Hi Lin Let Kyalsin,
I truly enjoy reading your posts about Bo Kyote Aung San. Please keep up the good work. I believealot of people would like to read such articles that are very rare nowadays.
ဒီစာဖတ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ အပြုအမူတွေနဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို လေးစားမိတယ်။ ကိုယ်နဲ့ စိတ်သဘောထားချင်း တိုက်ဆိုင်တော့လည်း အထူးအံ့သြမိပါတယ်။